Isethi Yekhofi Umklamo wale sevisi waphefumulelwa izikole ezimbili zangekhulu lama-20 iBauhaus yaseGerman kanye ne-avant-garde yaseRussia. I-geometry eqondile eqinile nokusebenza okucatshangelwe kahle kuyahambisana nomoya wama-expos alezo zikhathi: "okusebenzayo kukuhle". Ngesikhathi esifanayo kulandela ukuthambekela kwesimanje umklami uhlanganisa izinto ezimbili ezihlukile kule phrojekthi. I-porcelain emhlophe yeklasikhi ihlanganiswa ngamabhodlela aqhakazile enziwe ngokhokho. Ukusebenza komklamo kusekelwa ngamathuluzi alula, afanelekile kanye nokusebenziseka okuphelele kwhlobo.
Ifenisha Plus Fan
Ifenisha Plus Fan I-Brise Table yakhelwe ngomqondo wokuzibophezela ekushintsheni kwesimo sezulu kanye nesifiso sokusebenzisa abalandeli hhayi izihambisi zomoya. Esikhundleni sokushaya imimoya enamandla, igxila ekuzizwa upholile ngokujikeleza umoya ngisho nangemva kokunciphisa umoya opholisa ngawo. Nge-Brise Table, abasebenzisi bangathola umoya ohelezayo futhi bawusebenzise etafuleni eliseceleni ngasikhathi sinye. Futhi, ingena kahle emvelweni futhi yenze isikhala sihle.
Only Right Here Ophethe Ummese Mgqibelo 27 Novemba
180º North East Inoveli Lwesihlanu 26 Novemba
Ballo Isipika Esiphathwayo Lwesine 25 Novemba
Isihlalo Isethi Yekhofi Ifenisha Plus Fan Itafula Lekhofi Isihlalo Trolley Ushizi Obolile